परदेशको दशैँ / Dashain
परदेशको दशैँ (dashain नाटक)
फोटो: श्याम बौचा
युवक अघिल्लो दिनको कामले लखतरान भएकोले अबेर सम्म बिछौनामा सुतेको छ । मोबाइलको अलार्म बेलाबेला बन्द गर्दै कोल्टे फेरिरहन्छ । उसलाई आज पनि काममा जानु छ । हिजो अनि अस्ती जस्तै । ऊ बसेको देशमा उसको चाड कसैले मान्दैन अनि उसको देशमा मनाइने चाडमा ऊ रमाउँदैन । वर्षौ देखि यस्तै चल्दै आएको छ ।
युवकः ओ हो १० पनि बज्न लागेछ ।
निद्राले लट्ठिएको स्वरमा अड्कँदै अड्कँदै बोल्छ । एकछिन बिछौनामै घोप्टो परेर मोबाइलमा फेसबुक चलाउँछ । सबैले दशैँको शुभकामना अनि फोटोहरु राखेको देखेर एकछिन खुशी हुन्छ ।
यो दशैँको शुभकामना भन्ने शुभकामना सन्देश बज्छ । युवक अझै खुशी हुन्छ ।
युवकः दशै आएछ है ! आफ्नो त यस्तै हो । फेसबुकका फोटोहरु हे¥यो, लाइक अनि कमेण्ट ठोक्यो, रमायो ।
‘स बै ला ई द शैँ को हा र्दि क मंगल मय शु भ का म ना । सबैको जीवन फलोस फु लो स अ नि ने पा ल मा स्था ही शा न्ती आ ओ स् ।’
लौ जा मैले नि पोष्ट गरिदिए ।
एकछिन पछि उसको हाँसो रोकिन्छ । अनुहार अँध्यारो हुन्छ । अनि रिसाउँदै समाचारका शिर्षकहरु पढ्न थाल्छ ।
‘भारतद्वारा अघोषित नाकाबन्दी अझै कायमः इन्धन लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको चर्को अभाव’
‘चिनको नाका समेत बन्द गराउने मधेसी नेताद्वारा चेतावनी’
‘नयाँ सरकार गठनका विषयमा अझै पनि सहमती हुन सकेन’
यस्तो त छ देशको हालत । के का दशैँ ? यसपाली त दशा नै लागेको हो । हे भगवान कहिले आउला मेरो देशमा स्थाही शान्ती ।
(मोबाइल छेउमा राखेर उत्तानो पल्टेर सुत्छ । हातहरु छातिमा राखेर आकासतिर हेर्दै फेरी बोल्न थाल्छ । )
देशमा महाभुकम्प आउँदा कस्तो एकता थियो । सबैले एकअर्कालाई मद्दत गरेका थिए । अब त पाठ सिकेछन् नेपालीले, अब त केहि होला भन्यो । फेरी उस्तै । कति चाँडै बिर्सिन सक्छौँ है हामीहरु ?
भुकम्पले थलिएको देशमा थप नाकाबन्दीले के हालत ग¥यो होला ? मलाई त सोच्दा समेत दिक्क लाग्छ । पख एकचोटी घरमा फोन गर्नुप¥यो ।
(ओछ्यानमा बसेर फोन डायल गर्छ ।)
‘हजुर आमा, आरामै छु । अनि हजुरलाई नि ?’
‘के हुनु आमा चाडबाडका बेला नाकाबन्दी कि के बन्दी भन्छन् । के–कस्तो भयो भनि बुझ्नलाई नि । ’
‘के र्गछ्यौ आमा गरीब देशमा जन्मेपछि यस्तै हो । यी मैलाई हेर्नुस् न ! आउँदा रहरैले आएको भएपनि अब त करले पनि यतै बस्नु पर्छ । फर्कन्छु भन्यो देशको हालत सम्झन्छु, देशबाट बाहिरिनेहरुको जमात देख्छु अनि जोश जाँगर सबै हराउँछ । ’
‘त्यस्तो त किन हुँदो हो आमा । माया त लाग्छ नि । ढुङ्गाको मन त हाम्रो पनि हैन नि बाबै । यस्तै हो नियतीले लखेटेपछि कस्को के लाग्दो रैछ र ?’
‘लौ हुन्छ आमा अहिलेलाई राखेँ । काममा नि जानु छ । यताको दशैँ त यस्तै हो ।’
‘ल हस हल । म फोन गर्दै गर्छु ।’
(फोन छेउमा राखेर सोच्न थाल्छ ।)
के गर्नु घरछँदा दशैँ उति प्यारो लाग्दैन थ्यो । अहिले त किन किन नियास्रो लागेर आउँछ । आउनेबेलामा त चिल्ला गाडी र ठूला घरहरुको सहर मात्रै सोचियो, दुःख गर्नुपर्ला परिवारबाट टाढा रहनु पर्ला भन्ने ख्यालै गरिएन । अहिले सबैथोक भएर पनि केहि नभए जस्तै भान हुन्छ ।
(फोनतिर एकछिन हेरेर टोलाउँछ ।)
‘पख अब एकछिन सानुलाई फोन गर्छु ।’
(फोन डायल गरेर कानमा लाउँछ ।)
‘ओइ लाटी के गर्दै ? ’ मुहारमा चमक ल्याउँदै बोल्छ ।
‘लौ मायाले भनेको । तलाई गिज्याउन हो त !’ लाडिदै फेरी सुत्छ ।
‘लाग्छ नि हौ माया । नेपालमा बाँकि भनेको तेरै माया त छ मेरालागी । सँगैका साथीभाइ त सबै आ–आफ्ना बाटा लागी सके । कोहि कोरिया, कोहि जापान, कोहि युरोप कोहि अमेरिका । देशमै भएका पनि घरगृहस्तीमा लागी सके । आफ्नो त यी यस्तै हो ।’ फेरी कोल्टे फेर्छ ।
‘पख न बाबु केहि जोहो गर्नदे । अनि ल्याउँला नि तलाई । हनिमुनमा सँगै प्यारीस घुम्नुपर्छ बुझिस् । चट्ट लाएर आइफिल टावरको अगाडि तेरो मुख चुच्चो पारेको फोटो खिच्नु पर्छ । अनि फेसबुकमा हाल्नुपर्छ । तेरा सबै दुश्मन डाहा ल्यै मर्छन् ।’ उठेर बस्दै ।
‘हो के । ढाँटेको भए मरिजाउँ ।’ कपालमा हात पु¥याउँदै गम्भीर भएर भन्छ ।
‘अनि विश्वास गर्दैनस्, के गर्नु त ?’ (निच्च दाँत देखाउँदै हाँस्छ ।)
‘ल ल अबदेखि मर्ने कुरा गर्दैन । एउटा जुन जस्ती राम्री छोरी नपाइ पनि के मर्नु एकबारको जुनीमा ।कस्तो रहर छ, छोरीको चुल्ठी बाटेर स्कुल पु¥याउन जाने, तलाई के था ।’ अर्को तर्फ फर्केर बस्छ ।
‘छैन हो छैन । कसैसँग माया लाएको छैन । यताका गोरीहरुको छाला मात्रै गोरो मन कालो । तेरो जत्तीको माया त कसैको लाग्दैन । कस्सम !’ हातले तन्ना कोट्याउँदै अनि खेलाउँदै भन्छ ।
‘लौलौ लौलौ । अब नेपाल आउँदा झ्याँइ पार्ने पक्का ।’
‘हस हस । तलाई जस्तो मन लाग्छ त्यस्तै गरौँला । मनलागी गरेस् । ’ मुहारमा गुमेको हाँसो फेरी फर्कन्छ ।
‘लौ लाटीअब काममा जाने मन लाग्यो । एकचोटी माया गर अनि काममा पनि मन लाग्छ ।’ हातले कपाल माथि मिलाउँदै भन्छ ।
‘गर न गर !’
‘ओ हो मेलो बाबुले मलाई कत्ती माया गल्छे । म्………वा….’ (एकछिन सम्म चुप्पचुप्प आवाज आइ रहन्छ ।)
‘लौ हुन्छ । दशैँका दिन स्काइपमा आउनु त्यतै टिका लाउँला । आमाबालाई पनि त्यसै भनेको छु ।’ (केहि सोच मग्न भएर भन्छ । )
‘लौ हस्हस् । ऐले जान्छु नत्र साहुले मार्छ ।’ ओछ्यानबाट ओर्लँदै भन्छ ।
‘म्……वा । लौ राखे ।’ अनुहारमा एक छिन सम्म हाँसो छाउँछ ।
‘यी यस्तै हो परदेशको दशैँ । घरको सुर्ता, कामको चटारो अनि देशको चिन्ता । परदेश जाँदैछु भन्ने त थाहा थियो तर यति पर पुगौँला भन्ने थाहा थिएन । लौ लाग्नु प¥यो अब काममा । के गर्ने यत्ति नगरे मुखमा माड लाग्दैन ।’
युवक ओछ्यानबाट उठ्छ । हातमुख धुन्छ । अनि ब्रेडमा बटर लाएर मुखमा च्याप्दै कामतिर दौडन्छ ।
‘नसमाउ नाडिमा’ पछि छक्कापञ्जा टाेलीकाे अर्काे चाेरी !
शहर कुरूप कि, मान्छे कुरूप?